मनोरञ्जन – Page5– SidhaRekha
२०७३ जेष्ठ २८, शुक्रबार ०८:३१२०७३ जेष्ठ २८, शुक्रबार ०८:३१२०७३ जेष्ठ २८, शुक्रबार ०८:३१ by Sidharekha Online
२०७३ जेष्ठ ४, मंगलवार २१:२५२०७३ जेष्ठ ४, मंगलवार २१:२५२०७३ जेष्ठ ४, मंगलवार २१:२५ by Sidharekha Online
‘बिहे ३२ वर्ष पुगेपछि मात्र गर्छु’
बलिउड नायिका आलिया भट्टले आफूले ३२ वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्ने कुरा बताएकी छिन् । केही समययता उनको र सिद्धार्थ मल्होत्राबीच प्रेम सम्बन्ध चलिरहेको बारे मिडियामा चर्चा चलेको थियो । यस विषयलाई लिएर अनेक टिप्पणी पनि भएका छन् । धेरैले त आलिया र सिद्धार्थले छिट्टै विवाह गर्ने अनुमानसमेत गरेका थिए । आइतबार साँझ मुम्बईमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने उनले भनिन्, ‘मलाई अहिले २२ वर्ष पुग्यो । मेरो विवाह गर्ने उमेर ३२ वर्ष हो ।' आलियाले त्यही कार्यक्रममा आफ्नो ‘जीवनसाथी’बारे पनि बताइन् । उनको धारणा थियो- ‘ जीवनसाथी मलाई हँसाउन सक्ने हुनुपर्छ । शारीरिक बनावट त त्यसपछिको कुरा हो ।’ आफ्नैबारे भट्टले थपिन्- ‘म बहुतै सेन्सेटिभ खालकी छु, कहिलेकाहीँ भावुक भइहाल्छु ।’
२०७३ बैशाख ४, शनिबार ०७:३८२०७३ बैशाख ४, शनिबार ०७:३८२०७३ बैशाख ४, शनिबार ०७:३८ by Sidharekha Online
वैशाख ४, २०७३- चलचित्र छायांकनका क्रममा बेलायत पुगेका बलिउड अभिनेता अक्षयकुमार प्रहरीको फन्दामा परे । बेलायतस्थित हिथ्रो विमानस्थलबाट पक्राउ परेका अक्षयलाई वैध भिसा नभएको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइएको बताइएको थियो । १५ दिने छायांकनको सेड्युअलमा लन्डन पुगेका अक्षय विमानस्थल कर्मचारीले उनको भिसा अवैध भएको बताएपछि चकित परेका थिए । अक्षय क्यानाडाका नागरिकका साथमा हिथ्रो विमानस्थल पुगेका थिए । क्यानाडाका नागरिक पर्यटकका रूपमा बेलायतमा बिनाभिसा आउन पाउने नियम भए पनि चलचित्र छायांकनका लागि भने भिसा लिनुपर्ने अधिकारीहरूको भनाइ थियो । विमानस्थल अधिकारीले दुवैसँग केही समय बयान लिएपछि कागजात बनाएर उनीहरूलाई छोडेका थिए । यस क्रममा अक्षयले डेढ घण्टा प्रहरी नियन्त्रणमा बस्नुपरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूको भनाइ छ । - एजेन्सी
२०७२ माघ २२, शुक्रबार ११:२८२०७२ माघ २२, शुक्रबार ११:२८२०७२ माघ २२, शुक्रबार ११:२८ by Sidharekha Online
देश छुट्याउने खेल नखेल्न धुर्मुसको आग्रह (भिडियोसहित)
माघ २२, हास्य कलाकार सिताराम कट्टेल (धुर्मुस)ले देश छुट्याउने खेल नखेल्न सबैसँग आग्रह गरेका छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको राष्ट्रिय गीति एल्बम सजगमा समावेश भएको मेरो देश इन्द्रेणी बोलको गीतमा अभिनय गर्दै धुर्मुसले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । टेलिभिजनको पर्दामा अनेक रुपमा देखिने सिताराम कट्टेल यो गीतको भिडियोमा भने सच्चा नेपाली भएर प्रस्तुत भएका छन् । गीतले नेपाललाई इन्द्रेणी रंगहरुसाग तुलना गर्दै मिलेर रहेका रंगहरु छुट्याउने खेल नखेल्न अपिल गरेको छ । गीतमा आफ्नो वास्तविक भावना पनि जोडिएकाले म्युजिक भडियोमा आफैंले अभिनय गरेको कट्टेलको भनाई छ । गीतमा स्वरुपराज आचार्यको स्वर छ भने बसन्त सापकोटाको संगीत छ । गीतलाई धुर्मुस सुन्तलीले निर्देशन गरेका हुन् ।
२०७२ माघ १६, शनिबार ००:३१२०७२ माघ १६, शनिबार ००:३१२०७२ माघ १६, शनिबार ००:३१ by Sidharekha Online
पलले सुन्तलीलाई आई लभ यू भनेपछि धुर्मुसले के गरे ? (भिडियाेसहित)
चर्चित हाँस्य कलाकार कुञ्जना घिमिरेलाई तपाइले विभिन्न रुपमा देख्नु भएको छ । तर, संभवत क्यूट मोडल भएर नृत्य गर्दै गरेको देख्नु भएको छैन होला । सिन्धुलीको वीपी राजमार्ग वरिपरी खिचिएको एक गीतमा उनले मोडल पल शाहसँग ‘आई लभ यू’ भन्दै रोमान्स गरेकी छिन् । दीनेश थपलियाको गीती एल्बम ‘सारांश २’मा समावेश ‘आई लभ यू’ बोलको गीतमा कुञ्जना र मोडल पल शाहले मोडलिङ गरेका छन् । भिडियोमा सिताराम कट्टेल ‘धुुर्मुस’ पनि देखिएका छन् । यो गीतमा इन्दिरा जोशी र सरोज ओलीको स्वर छ । बसन्त सापकोटाले संगीत भरेको यो गीतको भिडियोलाई कविराज गहतराजले कोरियोग्राफी गरेका हुन् । गीतको छायांकन संजय लामाले गरेका छन् भने अर्जुन पोख्रेलको यसमा सम्पादन छ । भिडियोलाई रोमान्चक बनाइएको छ । संभवत दर्शकले कुञ्जना र सितारामलाई पहिलो पटक यस्तो अवतारमा देख्न पाएका छन् ।
२०७२ माघ ८, शुक्रबार ०९:३६२०७२ माघ ८, शुक्रबार ०९:३६२०७२ माघ ८, शुक्रबार ०९:३६ by Sidharekha Online
कमेडी नाइट विद कपिलकी पलक पक्राउ
पुस ३० – भारतीय हाँस्य अभिनेता किकू शारदा अर्थात पलकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । चर्चित भारतीय टेलिभिजन कार्यक्रम कमेडी नाइट्स विद कपिलमा पलकको भूमिकामा अभिनय गर्ने गरेका शारदालाई धार्मिक गुरु गुरमित राम रहिम सिंहको नक्कल गरेकोमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनलाई हरियाणा प्रहरीले मुम्बईबाट पक्राउ गरेर अदालतमा पेश गरको थियो । अदालतले किकुलाई १४ दिनको न्यायिक हिरासतमा राख्न आदेश दिएको छ । धार्मिक गुरु राम रहिमका समर्थकले किकु विरुद्ध धार्मिक भावनामा आघात पुर्‍याएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । गएको वर्षको डिसेम्बर २७ मा प्रशारण भएको कमेडी नाइट विद कपिलमा किकु राम रहिमको रुपमा प्रस्तुत भएर उनको नक्कल गरेका थिए । त्यसपछि ३१ डिसेम्बरमा राम रहिमका समर्थकले किकु विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । किकुले आफ्नो ट्वीटरमा राम रहिमको नक्कल गरेकोप्रति माफि मागेका थिए । किकुले आफ्नो उद्देश्य
२०७२ माघ ५, मंगलवार १५:५०२०७२ माघ ५, मंगलवार १५:५०२०७२ माघ ५, मंगलवार १५:५० by Sidharekha Online
२०७२ पुष १८, शनिबार ०६:२८२०७२ पुष १८, शनिबार ०६:२८२०७२ पुष १८, शनिबार ०६:२८ by Sidharekha Online
आफ्नै गीतमा प्रियंका कार्की टु पिसमा
काठमाडौं । ग्ल्यामरस एवं बोल्ड नायिकाको रुपमा चिनिन्छिन् प्रियंका कार्की । चलचित्रका गीतमा होस् या म्यूजिक भिडियो । बोल्ड अभिनय गर्न गार्‍हो मान्दिनन् उनी । उनै नायिका पछिल्लो समय गायिकाको रुपमा समेत परिचित छिन् । उनको आफ्नै स्वर रहेको गीतको भिडियोमा टु पिसमा अभिनय गरेकी छिन् । स्वतन्त्र बोलको गीत गाएकी प्रियंकाले नयाँ वर्षको अवसरमा युट्युववाट सोही गीतको भिडियो सार्वजनिक गरेकी छिन् । प्रियंका आफ्नै स्वर रहेको भिडियोमा मोडलिङ र निर्देशन समेत प्रियंकाकै रहेको छ । उनको स्वरको वारेमा चर्चा होला नहोल भन्न सकिन्न तर, भिडियो निर्देशनमा उत्कृष्ट क्षमता प्रस्तुत गरेकी छिन् । सैलश सिंहले रचना गरेको गीतमा संगीत पनि सैलेशकै छ । नेपालमा नायिकाहरुले स्वर दिन थालेको धेरै भएको छैन । यस अघि पनि रेखा थापा, गौरी मल्ल लगायतका नायिकाले स्वर दिएका थिए । तर, उनीहरुको स्वरको खास चर्चा भएन । प्रियंकाको
२०७२ पुष १८, शनिबार ०६:२५२०७२ पुष १८, शनिबार ०६:२५२०७२ पुष १८, शनिबार ०६:२५ by Sidharekha Online
१ करोड पारिश्रमिक माग्ने पहिलो कलाकार हुन् नाना
मुम्बई । बलिउड अभिनेता नाना पाटेकर ६५ वर्ष लागेका छन् । नायिका विद्या वालान ३७ लागेकी छिन् । ढाडमा समस्या भएको भन्दै अस्पताल भर्ना भएकी विद्यालाई जन्मदिनकै दिन अस्पतालले डिस्चार्ज गरिदिएको छ । उनको स्वास्थ्य स्थिती सामान्य रहेेको अस्पतालले जनाएको छ । सन १९५१ जनावरी १ मा जन्मिएका नाना बलिउडमा जिवन्त अभिनय गर्ने कलाकारका रुपमा चिनिन्छन् । उनको जन्म महाराष्ट्रको रायगढ जिल्लाको मूरुद जजीरामा भएको थियो । कुनै वेला बलिउडमा सबै भन्दा धेरै चर्चा उनकै हुन्थ्यो । अहिले पनि उनको शैलिको संवाद बोल्न सक्ने अर्को कलाकार बलिउडमा छैन भनिन्छ । यस्तो छ उनको रहस्यः १. नाना पाटेकरको अभिनय क्षमता देखेर अभिनेत्री स्मिता पाटिलले नानालाई जसरी पनि अभिनयमा ल्याउनु पर्ने कुरा गरेकी थिइन् । २. चलचित्र ‘प्रहार’ मा कमान्डोको भूमिका निर्वाह गर्ने भएपछि उनले पूर्णेमा गएर प्रशिक्षण लिएर आएका थिए । यो उनको पहिलो